Ọdịiche dị n'etiti nje na nje: njirimara na nyocha | Mmeghari ohuru Green
Mgbe anyị na -arịa ọrịa na anyị ga -amalite ịgwọ ọrịa dị iche iche, a na -enwekarị mgbagwoju anya mmalite ọrịa ahụ ma nje ma ọ bụ nje kpatara ya. E nwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti nje na nje nke a ga -eburu n'uche mgbe ị na -agwọ ihe mgbaàmà dị iche iche yana igbochi nnukwu mmebi.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe bụ isi ihe dị iche n'etiti nje na nje na ihe bụ ọrịa bụ isi.
2 Nkọwa nje na nje
3 Ọdịiche dị n'etiti nje na nje
Nje virus dị obere karịa nje bacteria ma nwee nnukwu ikike maka mmụba na mgbasa. A na -agwọ ọrịa nke ụdị nje abụọ a kpatara n'ụzọ dị iche iche.
Ọ bụ ezie na a na -amata obere ozi karịa, n'ụwa enwere ọtụtụ obi abụọ na -emetụta coronavirus ọhụrụ. N'etiti ọtụtụ ajụjụ, n'ihi amaghị ama ma ọ bụ ozi na -ezighi ezi, ọtụtụ mgbe na ndị mmadụ ajụjụ a na -ebilite ma enwere ike iji ọgwụ nje gwọọ coronavirus. Azịza ya bụ mba: enweghị nje nwere ike iji ọgwụ nje gwọọ ya, nke a na -eji na -agwọ ọrịa nje na -ebute. A na -agwọ ọrịa nke nje na nje kpatara n'ụzọ dị iche iche n'ihi na ha anaghị eme otu ihe ahụ n'ahụ ha na -emetụta.
Nje virus na nje bacteria pere mpe, nọ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ elu niile, ọ bụkwa ya kpatara ọtụtụ ọrịa. Ma ha abụghị otu.
Nkọwa nje na nje
Nje bacteria bụ mkpụrụ ndụ nwere otu mkpụrụ ndụ, ha na-enwetakwa nri sitere na gburugburu ebe ha bi. Ha nwere ike bute nsogbu dịka oghere, ọrịa mmamịrị, ọrịa ntị, ma ọ bụ akpịrị akpịrị, naanị ịkpọ aha ole na ole. Mana nje anaghị ebute ọrịa mgbe niile: ụfọdụ n'ime ha nwere mmetụta bara uru, dịka ọmụmaatụ, nyere aka na -arụ ọrụ nke sistem nri nri, Ha na -enyere aka hazie ma nweta nri sitere na nri na igbochi nje na -emerụ ahụ ịbanye. A na-eji ụfọdụ ụdị nje bacteria eme ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ mgbochi ndụ.
Nje virus dị obere karịa nje bacteria. Ha abụghị sel zuru oke: ha bụ naanị mkpụrụ ndụ ihe nketa nke edobere n'ime akwa protein. Ha chọrọ akụkụ sel ndị ọzọ ka ha mụta nwa, nke pụtara na ha enweghị ike ịnọrọ onwe ha belụsọ ma ha bi n'ime ihe ndị ọzọ (dịka mmadụ, osisi, ma ọ bụ anụmanụ).
Ụfọdụ nje nwere ike igbu nje ma ọ bụ lụso nje ndị na -egbu egbu ọgụ. A na -akpọ ha bacteriophages ma ọ bụ bacteriophages (“ilo” n'asụsụ Grik): ha na -efe efe ma bibie nje bacteria akọwapụtara na mucous membranes nke nri nri, akụkụ okuku ume na usoro ịmụ nwa.
Nje nwere ike ịdị ndụ na mpụga sel dị ndụ ruo obere oge. Agbanyeghị, ozugbo ha banyere n'ahụ mmadụ, ha na -amụba ngwa ngwa ma nwee ike bute ndị mmadụ ọrịa. Ha nwere ike bute ụfọdụ ọrịa nrịanrịa, dị ka oyi nkịtị, yana ọrịa ndị ọzọ siri ike, dịka kịtịkpa ma ọ bụ ọrịa AIDS, nke nje virus na -ebelata ahụ́ mmadụ (HIV) kpatara.
Ha nwere ikike mmụba siri ike, nke na -apụtachaghị na ha na -emewanye ihe ike, mana mkpụrụ ndụ ihe nketa ha agbanweela, ya bụ, usoro nke mkpụrụ ndụ ihe nketa dị n'ime urughuru nwere ike ịbụ DNA ma ọ bụ RNA. Nje virus nwekwara ike na -efe efe nke ukwuu, na -akpata ọrịa na -efe efe, mgbe ọrịa na -efe efe gbasara na ọtụtụ mba.
Enwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti nje na nje bacteria, ebe anyị ga -edepụta na nkọwa n'okpuru:
Size: nje bacteria na -ebu ibu karịa nje. N'iburu n'uche na n'ọnọdụ abụọ a, anya mmadụ anaghị ahụ ha ma enwere ike iji naanị mikroskopu chọpụta ha. Enwere ike iji nje microscope hụ nje bacteria, ebe enwere ike ịhụ nje naanị na microscope elektrọn, na -eji anya elektrọnik.
Nhazi: Ngwakọta nke nje a dịtụ nfe, nke nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa RNA ma ọ bụ DNA kechiri n'uwe protein. N'ụzọ dị iche, nje nwere usoro dị mgbagwoju anya dị n'ime ya na mgbidi sel ha bụ ebe cytoplasm, ribosomes, na genome nke nje dị.
Mmeputakwa: Nke a bụ nsogbu ọzọ nje na nje anaghị ekerịta. Nje bacteria nwere ikike ito eto na ịmụba n'onwe ha. Enwere ike ikewa nkewa karịa na sel ndị a. Nje virus enweghị ike ikewa onwe ha, ha na -emepụtacha ihe na -adịghị agwụ agwụ ma wakpo mkpụrụ ndụ ndị ọzọ iji nyefee ozi mkpụrụ ndụ ihe nketa ha. Ha na -emepụtagharị, mana na sel ndị ọbịa, ha na -ebute ọrịa ma bute ọrịa.
Ntachi obi: Nje bacteria na -adị n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe niile n'ụwa na usoro ha na -eme ka ọ na -eguzogide oke. Maka nke a, n'adịghị ka nje, ha nwere ike ịlanarị oke okpomọkụ wee dị ndụ ogologo oge na mpụga ihe ndị ọzọ. Eziokwu ọzọ nke na -abawanye ike ha bụ na ha nwere ike nweta nri n'ọtụtụ ebe dị iche iche, organic na anụ ahụ.
Banyere nje, n'ozuzu, ha nwere ike ịdị ndụ ruo ọtụtụ awa ma ọ bụ ọbụna ụbọchị, ọkachasị na igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ plastik, mana ka oge na -aga, ọrịa ha ga -ebelata n'ihi na nje enweghị ike imepụtaghachi.
Ọgwụgwọ: nnukwu ihe dị iche n'etiti nje na nje. Ọgwụ nje adịghị arụ ọrụ megide nje, ha enweghị ike igbu ha, ha na -ebutekwa ndị ọrịa nnukwu ihe egwu n'ihi mpụta nke nguzogide nje. N'otu oge ahụ, e mepụtala ọgwụ mgbochi ọrịa iji lụso ụfọdụ nje ọgụ.
Ọ bụrụ na isi mmalite ọrịa ahụ bụ nje bacteria na ọgwụ nje zuru oke dị, ọgwụgwọ adịghị ọnụ ma, ka emechara atụmatụ ọgwụgwọ ahụ, ọ ga -alaghachi na nkịtị n'ime ụbọchị ma ọ bụ izu ole na ole. Ọ bụrụ na mmalite nke ọrịa ahụ bụ nje, ọnọdụ ahụ ga -agbagwoju anya n'ihi na enweghị otu ụdị ọgwụ mgbochi na ọnụọgụ na arụmọrụ.
Ya mere, ndị ọkachamara ahụike na -eche ọgwụgwọ dị mma nke ọrịa nje na -efe efe nke ukwuu na ọrịa nje nke nje kpatara. Nje ndị a adịghị ka ọrịa, mana enweghị ọgwụgwọ dị irè. Ya mere, a na -eji ha eme agadi ndị nwere sistemụ na -esighi ike iji hụ ma ọrịa ahụ dị oke njọ ma ọ bụ na mbụ na onye ọrịa.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu ihe dị iche n'etiti nje na nje.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ọdịiche dị n'etiti nje na nje